I-Authentic Herders Mountain Hut kwiVelika planina - I-Airbnb
I-Authentic Herders Mountain Hut kwiVelika planina
Inqugwala sinombuki zindwendwe onguMiha
I-hut yethu "i-Devovčeva bajta" ifumaneka kwi-Herders's settlement yedlelo elikhulu lase-Slovenia - i-Velika planina embindini we-Kamnik Savinja Alps, i-30 km kumntla we-Slovenia-capital city Ljubljana, kwi-altitude 1544 m (5066 ft).
Indawo yokuhlala yabeHerders yintsomi efana nelali apho ubomi bububo njengoko babunjalo kwiminyaka elikhulu eyadlulayo. Iindlwana ezilula zibonelela ngekhusi elisisiseko kubalusi kunye neenkomo zabo. Isakhiwo esikhethekileyo sendawo yokuhlala kunye nokumiswa kwayo kwentaba kuyenza ibe yenye yezona ndawo zinomtsalane kwiiAlps zaseSlovenia.
Igqibelele kwabo bathi:
-ungathanda ukufumana ubomi obulula njengoko kwakunjalo ngaphambili,
-thanda iinkomo kunye neentyatyambo zeentaba;
-Sixabise isiko kunye noyilo olulodwa lweentaba,
-ungathanda ukufumana ubomi abelusi entabeni "idolophana",
- njengokuhamba intaba kunye nokukhwela ibhayisekile ezintabeni.
Yakha ngeminyaka yoo-1990 ngokwesicwangciso soyilo sokuqala, indlwana yethu ibisetyenziswa njengomalusi kwiinyanga zasehlotyeni ukusukela ngoko.
I-hut inikeza iibhedi ezi-7, ezi-2 kwindawo eqhelekileyo (ibhedi yebhedi) kunye ne-5 kwigumbi lokulala le-attic (oomatrasi baphantsi).
Akukho manzi ahamba endlwini, amanzi okusela amatsha azakumpontshelwa kwimpompo yamanzi engaphandle, kufutshane nendlwana.
Indlu yangasese yokwenza umgquba ekhoyo ngaphakathi kwendlwana.
Umbane unikezelwa ngephaneli yelanga kwaye ubonelela nge-low-voltage (12 V) kwizibane kunye neplagi yerediyo. Iifowuni zinokubizwa xa usebenzisa intambo ye-usb.
Ikhitshi linomlilo kunye nezitovu zerhasi. Okokuqala ingasetyenziselwa ukufudumeza, ukupheka kunye nokubhaka, kamva ukupheka.
Zonke izinto ezisisiseko zasekhitshini (i-silverware, iikomityi, iimbiza...) ziyafumaneka.
IVelika planina ikwiKamnik Savinja Alps, ethandwa ngabakhenkethi kwaye inikezela ngeendlela ezininzi zokunyuka intaba. I-Kamniška Bistrica Valley ekufutshane kunye nedolophu yakudala iKamnik zithandwa ngabantu abathanda indalo kunye nabakhenkethi bezolonwabo. Lo mmandla utyebile ngeendawo zendalo kunye nenkcubeko kunye nesiqingatha seyure ukusuka eLjubljana, ikomkhulu laseSlovenia.
Kwisithuba seyure ukusuka kule ndawo, unokufika eLake Bled, eLogarska dolina Valley, kwisikhululo seenqwelomoya iLjubljana kunye nezinye iindawo ezininzi ezidumileyo kwiiAlps zaseSlovenia.
Umbuki zindwendwe ngu- Miha
Mna nosapho lwam siyafumaneka kuyo nayiphi na imibuzo. Ungasitsalela umnxeba, usithumelele iSMS okanye usithumelele i-imeyile nangaliphi na ixesha.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Stahovica